प्रशिक्षक पटवाल भन्छन्, ‘हामी तयार रहेनछौं, छनोट नभएर राम्राे भयो’ - Everest Dainik - News from Nepal
प्रशिक्षक पटवाल भन्छन्, ‘हामी तयार रहेनछौं, छनोट नभएर राम्राे भयो’
१२ साउन, काठमाडौं । एक वर्षका लाग नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त हुँदा उमेश पटवालको पहिलो लक्ष्य थियो, टी-२० विश्वकप अष्ट्रेलिया । तर नेपाल ग्लोबल छनोटमा नै पुग्न सकेन ।
सिंगापुरमा आइतबार सम्पन्न एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा घरेलु टोलीसँग ८२ रनको लज्जास्पद हार व्यहोर्‍यो । पहिलो खेलमा कतारसँग हारेको नेपालले चार मध्ये दुई वटा मात्र खेल जित्थ्याे र तेस्रो स्थामा चित्त बुझायो ।
समग्रमा सिंगो प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन सन्तोषनक रहेन । वर्षाका कारण ९ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा मलेसियालाई ७ विकेटले हराउँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले ५१ रन बनाएका थिए भने कुवेतमाथि ७ विकेटको जित हात पार्दा कप्तान पारस खड्काको ब्याटिङ चलेको थियो । उनले ६८ रन बनाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस पारसको ऐतिहासिक शतक, सिंगापुरविरुद्ध नेपाल ९ विकेटले विजयी
फाइनल सरहको खेलमा सिंगापुरविरुद्ध ब्याटिङ, बलिङ र फिलिल्ङ तीनै पक्षमा नेपाल कमजोर देखियो । पारस र सन्दीपले प्रदर्शन गर्न नसकेको बेला सिंगो टिमको भूमिका हुने भन्दै प्रशिक्षक पटवालले भने, ‘यूएईमा त्यस्तै भयो । तर यो सँधै नहुने रहेछ ।’
च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य लिएर आएको टिम तेस्रो भयो नि भन्ने प्रश्नमा पटवाल भन्छन्, ‘ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी तयार रहेनछौं । तयार नभएकाले हाम्रो छनोट भएनौं, राम्रै भयो । यस्तो टिमले ग्लोबल (छनोट) खेल्न सक्दैन ।’ उनले अघि भने, ‘नभए ग्लोबलमा पनि यस्तै हुन्थ्यो ।’
याे पनि पढ्नुस सागका लागि पुरुष क्रिकेटको तयारी आइतबारबाट, को–को परे छनोटमा?
हारको जिम्मेवारी आफूसहित सबैले लिने र किन हार्‍यौं भन्ने समिक्षा गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘बोर्ड नभएको बेला धेरै कुराका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । तर आगामी दिनमा हामी आईसीसीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’
नेपाली टोलीमा खेल जिताउने खेलाडीहरु चाहिएको भन्दै नयाँ अनुहारलाई पनि मौका दिइने बताए ।
पारसले माफी मागे
छनोट प्रतियोगितामा दबाव हुनु स्वभाविक भएपनि आफूहरुले क्षमता अनुसार खेल्न नसकेको कप्तान पारस खड्काले बताएका छन् । भन्छन्, ‘टिमका रुपमा हाम्रो टिम खराब होइन । तर, समग्रमा हाम्रो प्रदर्शन खराब रहृयो ।’
याे पनि पढ्नुस नेपाल दोस्रो बन्‍न पनि असफल, लगाएको मेडल फिर्ता !
विश्वकप छनोटमा पुग्न खेलाडीहरुका लागि पनि असफलता भएको भन्दै उनले भने, ‘खेलाडी र कप्तानको रुपमा जिम्मेवारी लिन्छु । सर्मथकहरुसँग माफी चाहन्छु ।’
एउटा प्रतियोगिता हार्दैमा सबै सकियो भन्ने नहुने भन्दै उनले व्यक्तिगत र टिमका रुपमा यो प्रतियोगितामा गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए । उनले अघि भने, ‘अब भाग्यमानी होइन, प्रदर्शन गर्ने टिम बन्नुपर्छ ।’ अनलाइनखबरबाट साभार
ट्याग्स: उमेश पटवाल, नेपाल भर्सेस सिंगापुर